Existence Magazing | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← ငမိုးရိပ်ချောင်း၊ ဒန်းပန်းရနံ့နှင့် လောကတက္ကသိုလ်အ၀င်
Notes of Development and Sustainable Development by Ko Tar →
January 21, 2008 · 1:02 pm
We arrange to publish online magazine, Phwet Ti Yar (Existence Magazine) that will present art, literature, including joke, educational and so on.
We will publish very soon as free copy.
ဖွဲ့တည်မှုဆိုပြီး မဂ္ဂဇင်းလေးတစ်ခု စီစဉ်နေပါတယ်။ စာပေ အနုပညာ (သုတ၊ ရသ) တွေဖော်ပြပါမယ်။ PDF Format နဲ့ Free ပေါ့။